သင် Claritin နှင့်အတူ Benadryl ယူနိုင်သလား? ဓာတ်မတည်ဆေးများရောစပ်နှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများ - ကျန်းမာရေးပညာရေး | မေ 2022
ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီသတင်း နှိပ်ပါ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ဖျော်ဖြေရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ဆီးဂိမ်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> နှာချေခြင်းကင်းသည့်ရာသီအတွက်ဓာတ်မတည့်ဆေးများကိုမည်သို့ပေါင်းစပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ
ယားယံ, ကြဲကြဲမျက်စိ။ Scratchy လည်ချောင်း။ မလိုအပ်သောချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်နှာချေခြင်း။ အကျွမ်းတဝင်အသံလား ထက်ပိုပြီး သန်း ၅၀ ရှိသောအမေရိကန်များသည်ဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသည် ။ အမှန်မှာဓာတ်မတည့်ခြင်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ဆth္ဌမမြောက်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဤတိုင်းပြည်သည်နှစ်စဉ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကုသမှုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲသည်။ Gesundheit ။
ပါးစပ်နှိမ်နင်းဆေးများ၊ နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားများနှင့်မျက်လုံးပေါက်များအပါအ ၀ င်သူတို့၏ဓာတ်မတည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန်အမေရိကန်များအနေဖြင့် over-the-counter ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့်လည်းဆေးဖြတ်ရန်အကြံပြုနိုင်သည်။ သို့သော်ဓာတ်မတည့်သူများစွာကသင့်အားပြောလိမ့်မည်ဆိုပါကသူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများအားလုံးကိုသက်သာစေမည့်ပြီးပြည့်စုံသောဆေးတစ်မျိုးမျှမရှိတော့ပါ။
ဒါကြောင့်များစွာသောလူဓာတ်မတည်ဆေးဝါးအပေါ်တက်နှစ်ဆစဉ်းစားပါဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်တတ်သောအမေရိကန်များသည်များသောအားဖြင့်မည်သည့်ဆေးသောက်သုံးသည်ထက်ပိုမသောက်သင့်ကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ သို့သော်မတူညီသောဆေးနှစ်မျိုးကိုအတူတကွသောက်သုံးခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသလား။ အဆင်ပြေ Allegra နှင့် Claritin ပေါင်းစပ်နေပါတယ် ? သင် Claritin နှင့်အတူ Benadryl ယူနိုင်သလား? ကျနော်တို့ထွက်ရှာတွေ့မှအချို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှု။
ဆက်စပ် : အရက်နှင့်ဓာတ်မတည့်ဆေးများရောစပ်ခြင်းသည်ဘေးကင်းပါသလော။
ဓာတ်မတည့်ဆေးများကိုရောစပ်ခြင်းသည်လုံခြုံပါသလား။ သင် Claritin နှင့်အတူ Benadryl ယူနိုင်သလား?
ဓာတ်မတည့်ဆေးအများစုကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမပေါင်းသင့်ကြောင်းဒေါက်တာဆူဆန်ဘက်ဆာကပြောသည် Mercy Medical Center Benimryl, Claritin, Zyrtec, Allegra သို့မဟုတ် Xyzal စသည့်ပါးစပ်ဆေး antihistamines များကိုအတူတကွမယူသင့်ပါ။ တစ်ခုရွေးပြီးနေ့စဉ်ယူပါ။ ဒီဆေးတွေကမင်းတို့ကိုနေ့စဉ်သောက်နေရင်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပိုကောင်းတယ်လို့သူမကရှင်းပြတယ်။
ဒေါက်တာ Duane Gels နှင့်ဓာတ်မတည့်သူ Annapolis ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ Annapolis တွင် Maryland ကပါးစပ်မှ anti -istamine တစ်ခုထက် ပို၍ ပေါင်းခြင်းသည်ပညာမဲ့သည်ဟုသဘောတူသည်။ ဒီနေရာမှာနှစ်ဆနှင့်အတူပြproblemနာပါပဲ, ဒေါက်တာ Gels ကပြောပါတယ်။ FDA ကဒီဆေးတွေကိုသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။ Claritin လူများသည်သူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလေ့လာမှုအတွက်ငွေပေးကြလိမ့်မည်။ Allegra သည်လည်းထိုနည်းတူဖြစ်သည်။ သို့သော် Claritin က Allegra နှင့်အတူယူအန္တရာယ်ကင်းရဲ့ဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများအတွက်ပေးဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Allegra သည် Claritin နှင့်လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုဆိုသောလေ့လာမှုများအတွက်အခကြေးငွေပေးမည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်လူနာတစ် ဦး သည်ပါးစပ်နှိမ်နင်းဆေးတစ်မျိုးနှင့်နှာချေခြင်းကိုမရပ်တန့်နိုင်လျှင်ကော။
RELATED: Benadryl အသေးစိတ် Claritin အသေးစိတ်ကို Zyrtec အသေးစိတ်အချက်အလက်များ | Allegra အသေးစိတ် | Xyzal အသေးစိတ်
ဒေါက်တာဂျယ်လ်က၎င်းတို့သည်ပါးစပ်နှာခေါင်းမသုံးဘဲပါးစပ်နှာခေါင်းသွေးကြောများသောက်ရန်အကြံပေးသည်။ သူများသည်နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားဖြစ်ကြသည်။ Flonase, Nasacort နှင့် Rhinocort တို့ကိုကောင်တာမှရနိုင်သည်။
အကယ်၍ ယားယံသောမျက်စိသည်လူနာ၏အဓိကပြareနာဖြစ်လျှင်သူသည်ဆက်လက်ရှိနေသည်။ လိမ်းဆေး antihistamine (မျက်စိပေါက်) သည် ပို၍ ကောင်းသည်။ အချို့ရွေးချယ်မှုများတွင် Ketotifen (Zaditor) သို့မဟုတ်ကောင်တာပေါ်မှ Olopatadine ကဲ့သို့သောဆေးညွှန်းများပါဝင်သည်။Pataday, Pazeo, ဒါမှမဟုတ် Patanol]။
သင်လုံးဝမလိုအပ်လျှင်နှာစိုသောအက်စစ်ဓာတ်များဖြစ်သော oxymetazoline (Afrin) ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ သုံးရက်မှငါးရက်ထက်ပိုပြီး Afrin မသုံးပါနှင့်။ ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ပြန်လည်ပြိုလဲခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေသည်။
ဆက်စပ် : သင် Afrin စွဲစွဲလမ်းမှုကိုခံစားနေရပါသလား | Zaditor အသေးစိတ်အချက်အလက်များ | Olopatadine အသေးစိတ် | Pataday အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Sudafed (နှုတ်ဖြင့်ယူ) သည် pseudoephedrine သို့မဟုတ် phenylephrine ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေါက်တာ Gels ကပြောကြားသည်။ ယခင်တစ်ခုသည် ID ကိုပြရန်လိုအပ်ပြီးဆေးညွှန်းမလိုအပ်သော်လည်းကောင်တာနောက်တွင်ရှိနေသည်။ ဒါဟာစင်ပေါ်ပေါ်မှာဖြစ်သောအဆုံးစွန်သောထက်အနည်းငယ်ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကဖိန်းဓာတ်နှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါအိပ်မပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်မြန်ဆန်သောနှလုံးခုန်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤလမ်းကြောင်းမသွားမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။
သို့သော်အသက် (၄) နှစ်အောက်ငယ်သောလူနာများတွင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသောကြောင့် Sudafed ကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မကြာသေးမီက monoamine oxidase inhibitors anti-depressants (MAOIs) တွင်ရှိနေခဲ့လျှင်၎င်းကိုရှောင်သင့်သည်။
ထိုအသင်သတိရသင့်တယ် အမြဲတမ်းဆေးထိုးအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ မည်သည့်ဆေးဝါးကိုမဆိုအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတံဆိပ်ပေါ်တွင်ကပ်ပါလာသည်။ (၄ နှစ်အောက်ကလေးငယ်တစ် ဦး အားဆေးဝါးမပေးမီမူးယစ်ဆေးဝါးတံဆိပ်ကိုအမြဲတမ်းရည်ညွှန်းကိုးကားပါ။ ) Antististines ဆေးများမြင့်မားစွာသည်အိပ်မောကျစေပြီးလျှင်မြန်စေသည့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုဖြစ်စေ၊ Zyrtec နှင့် Claritin ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများသည် FDA မှခွင့်ပြုထားသောဆေးပမာဏဖြင့်အိပ်ငိုက်ခြင်းမရှိပေ။ ဒါ့အပြင်သက်သာစေသောဆေး antihistamines များ (Benadryl ထင်) အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်အချို့ anti -istamines များကိုနာကျင်မှုဆေးသို့မဟုတ် decongestants နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အခြားနာကျင်မှုဖြစ်စေသောဆေးကိုသောက်သုံးသူသို့မဟုတ် decongestant ကိုသောက်လျှင်၎င်းသည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်တံဆိပ်ကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ သင်ဆေးညွှန်းဖြစ်စေ၊ ဆေးဝါးဖြင့်ဖြစ်စေဖြစ်စေအခြားမည်သည့်ဆေးကိုမဆိုသောက်လျှင်သင်နှင့်သင်၏ဓာတ်မတည့်ဆေးကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာသောက်ပါကသင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အလွန်အကျွံယူသည်ဟုသို့မဟုတ်သင့်ကလေးအားအလွန်အကျွံပေးသည်ဟုသင်ထင်လျှင်အဆိပ်ထိန်းချုပ်မှုကိုသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဖုန်းနံပါတ်သည် 1-800-222-1222 သို့မဟုတ်အသုံးပြုပါ အွန်လိုင်းကိရိယာ ။ သံသယဖြစ်တဲ့အခါ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုမေးပါ။
ဤတွင်ကျန်းမာသော (နှင့်တိုတောင်းသော) ဓာတ်မတည်ရာသီမှပဲ!
ဘယ် naloxone ဆေးကိုရသင့်သလဲ။
ခြေသည်းလက်သည်းမှိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် apple cider vinegar
သွေးပေါင်ကျစေဖို့အတွက် apple cider vinegar ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ